मङ्सिर १५ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Likhu Online
मङ्सिर १५ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
१५ मंसिर २०७७, सोमबार ०५:३९ प्रकाशित
बिक्रम संबत २०७७ साल मार्ग १५ गते सोमबार, सन २०२० नोभेम्बर ३० तारिख । हेर्नुहोस तपाइको राशिफल
घरमा साथीहरू तथा आफन्तहरूको आगमनले खुशीको वातावरण हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। यात्राको योग बन्नेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन उत्तम रहनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको आनन्द मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ।
स्वास्थ्य मन्ध्यम रहनेछ। खर्चको चिन्ताको कारण व्याकुल हुनसक्छ। वाणीमा संयम राख्नुहोला। खानपानमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा महिला सहकर्मीहरूबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। आर्थिक हिसाबले दिन मध्यम रहनेछ। मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनसक्छ।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ। परिवारका सदस्यसँग मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। दुर्घटनाको योग रहेकोले सजग रहनुहोला। खर्च आय भन्दा बढी हुनेछ। अनुचित कार्यमा समय व्यर्थ जानेछ।
व्यवसायमा लाभ हुनेछ र आयको स्रोत बढ्नेछन्। साथीहरूसँगको भेटले आनन्द महशुस हुनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। रमणीय यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। पत्नी वा छोराबाट लाभ मिल्नसक्छ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ।
उच्च मनोबल तथा आत्मविश्वासका साथ प्रत्येक कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुनेछ। व्यापारको क्षेत्रमा तपाईंको प्रतिभा बढ्न सक्छ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। बुबाको सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कला र खेल क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। भूमि जग्गा सम्बन्धि कामका लागि समय अनुकूल रहनेछ।
धार्मिक काम र यात्राको लागी समय धेरै अनुकूल छ। साथीहरू र आफन्तहरूसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। स्त्री मित्रबाट लाभ मिल्नेछ। विदेशी-आधारित नातेदारहरूबाट शुभ समाचार मिल्ने सम्भावना छ। भाइबहिनीहरूबाट आर्थिक लाभ मिल्नेछ।
वाणीमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। नयाँ सम्बन्ध स्थापना गर्नु हानिकारक हुनसक्छ। आर्थिक संकट आउनसक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्नसक्छ। कार्यक्षेत्रमा भने समय अनुकूल रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्ने सम्भावना छ। परिवारमा नकारात्मक वातावरण रहनेछ।
तपाईंको लागि यस दिन आनन्दमय रहनेछ। सामाजिक मान-सम्मान बढ्नेछ। साथीहरु र आफन्तहरुसँग यात्रा रमाईलो हुनेछ। मनोरञ्जन स्थान वा पर्यटन गन्तव्यमा जाँदा पनि मन प्रशन्न रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ।
परिवारमा आनन्दको वातावरण रहनाले मन प्रसन्न रहनेछ। तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ। व्यवसाय क्षेत्रमा दिन लाभदायक रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीबाट भरपूर साथ सहयोग मिल्नेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ।
स्वास्थ्यको बारेमा पनि चिन्ताको विषय रहला। कार्यक्षेत्रमा उच्च अधिकारीहरूको असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्नेछ। सन्तानसँग मतभेद हुने सम्भावना छ। बच्चाको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन।
शारीरिक तथा मानसिक रूपले तपाईं अस्वस्थ रहनुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन शुभ रहनेछ। यस दिन आयोजित प्रत्येक कार्य राम्रोसँग सम्पन्न हुनेछ। महिलाको सौन्दर्य प्रसाधनका लागि खर्च हुनेछ। जग्गा, घर, सवारी साधन आदिको कार्यमा विशेष ध्यान दिनुहोस्।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ रहनेछ। सिर्जनात्मक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने सम्भावना देखिन्छ। वैचारिक दृढता र मानसिक स्थिरताका कारण सरलताका साथ कार्य सम्पन्न हुनेछ। जीवनसाथीको पूर्ण समर्थन प्राप्त हुनेछ। रमणीय यात्राको योग बन्नेछ। नोट: राशिफलले जेसुकै बताए पनि सकारात्मक सोचकसाथ अगि बढ्नुहोस, शुभदिन